Momba ny strudels, tatena ary famenoana - tantara sy toro-hevitra
Raha te hanana andilana fanenitra ianao dia mihinana strudel paoma matetika »- ny afisy toy izany dia mandravaka ny ravaky ny iray amin'ireo fivarotana mofomamy Viennese malaza. Ary eo anilany no misy ny sarin'i Sissi mahafinaritra - vadin'ny amperora Australiana Franz Joseph.
Nilaza izy ireo fa ity andriambavy ity, mahafinaritra amin'ny lafiny rehetra, dia nankafy ny tenany saika isan'andro strudel miaraka amin'ny gravy berry malefaka ary miaraka amin'izay dia mijanona ho mahia.
Ity zava-misy ity dia nanampy betsaka tamin'ny zava-misy fa ny horonam-paoma matsiro dia nanjary mpahazo ny sekoly pastry Viennese ary nahita mpankafy tsy any Austria ihany, fa koa mihoatra ny sisintaniny.
Tsy dia maro ny olona mahalala fa tany Vienna tamin'ny andro taloha dia nantsoina hoe "scandalos" ity tsindrin-tsakafo ity - afaka nanapaka mora foana ny fifamofoana ny mpampakatra raha toa ka nandrahoana strudel ratsy ilay nofidiny.
Noho izany, ny zazavavy dia tsy maintsy nanao fanazaran-tena tsy tapaka, nandinika manokana ny fanomanana ny koba. Ary tsy mora izany. Ireo vehivavy mpikarakara tokantrano za-draharaha za-draharaha dia nino fa ny soson'ny koba strudel dia tokony ho manify ka ho mora vakiana ny lahatsoratra ao amin'ny gazety.
Ny sosona dia tokony ahorona amin'ny servieta lamba naparitaka amin'ny lafarinina (miaraka amin'ny fanampian'ny napkin dia azo atao tsara ny manakodia ny horonan-taratasy), ary alohan'ny ahodin-tsakafony dia tazonina ao anaty menaka legioma mafana.
Fisafidianana famenoana strudel
Fahasarotana maro no nipoitra tamin'ny famenoana azy: ny fisafidianana paoma "marina" - mahery sy mamy, manangona voaloboka, kanelina sy voanjo, ary aza adino ny manandrana ireo fangaro miaraka amin'ny ronono sy liqueur voasary. Amin'izao fotoana izao, ny mpanambady dia manohy mandray ny fanomanana strudel amin'ny fahamatorana rehetra, na dia tsy noheverina ho fitsaboana "scandalo" nandritra ny fotoana ela aza.
Strudel miaraka amin'ny paoma - mifidy ny famenoana
Na izany aza, raha manapa-kevitra ny hampifaly ilay tery amin'ny paoma ianao dia afaka misafidy fomba fahandro tsotra kokoa. Ohatra, manendasa taten. Araka ny angano frantsay iray, efa ho zato taona sy sasany lasa izay, ity mofomamy ity dia nomanin'ny tompon-trano fandraisam-bahiny voalohany tao an-tanànan'i Lamotte-Bevron akaikin'ny Orleans, Sisters Stephanie ary Caroline Taten. Napetrany tao anaty lasitra ny paoma iray, narotsany tamin'ny siramamy karamela, norakofana fonosana koba malefaka ary nandrahoina tao anaty lafaoro. Araka ny hitanao, ny fomba fahandro tsy dia tena tany am-boalohany. Ary ny teboka iray manontolo dia tsy amin'ny resipeo velively, fa amin'ny fomba fanompoana.
Io fotsiny no nandatsaka ny lasitra teo ambony latabatra ireo rahavavy, nilatsaka avy tao ny mofomamy, ary natolotr'izy ireo tamin'ny famenoana paoma. Tamin'izany andro izany, zava-baovao ny fikarakarana toy izany: namboarina ny pies - nafenina ny ao anatiny na ny ao ambany, ao ambanin'ny koba. Nilaza izy ireo fa "nandositra" avy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny i Taten tamin'ny farany ary namaka tao amin'ny lapan'ny mpanjaka.
Tombontsoa azo avy amin'ny voankazo maina amin'ny famenoana Strudel
Raha mieritreritra momba ny famenoana hanendasana pie na mofomamy indray ianao dia tokony ho tadidinao ny voankazo maina. Ny aprikotika maina, mahavoky, voaloboka, daty, aviavy, paoma maina, mananasy na papay no matsiro sy mahavariana dia heverina ho mpamonjy aina tokoa ho an'ireo manana nify mamy. Zava-dehibe ihany koa fa ny voankazo maina dia trano fitehirizana vitamina sy microelement sarobidy izay misy fiatraikany mahasoa amin'ny asan'ny fo sy ny vavony, manatsara ny fitadidiana ary manome hery ny vatana.
Mameno strudel voankazo maina
Ho fanampin'izay, ny tsirairay amin'izy ireo koa dia ilaina amin'ny fombany avy. Tsy maro ny olona mahalala fa ny daty, ohatra, dia misy akora tsy manam-paharoa izay manampy amin'ny fanalana ny aretin'andoha sy sery. Ny papaya dia mampihetsika ny metabolisma ary mampitombo ny fanaovana firaisana ara-nofo, ny aviavy dia misoroka ny fivoaran'ny aretin'ny tiroid, ary ny voaloboka dia manankarena boron, izay manamafy ny taolana.
Ny prun, apricots maina ary serizy dia mitana toerana manokana ao amin'ny fianakavian'ny voankazo maina: tsy manadio ny vatana fotsiny izy ireo, fa mamelombelona ny sela hoditra koa. Ny tombony azo antoka amin'ny voankazo maina dia ny tsy fisian'ny loko artifisialy sy additives ao anatiny.
Fomba fisafidianana sy fitehirizana voankazo maina ho an'ny strudel
Rehefa mitahiry voankazo dia aza hadino fa tsy azo tehirizina anaty harona plastika izy ireo. Noho izany antony izany dia tokony hampiasa harona rongony na siny fitaratra misy sarony. Rehefa mifidy voankazo maina dia tsy maintsy manombatombana aloha ny endrik'izy ireo. Raha toa ka diso tafahoatra ny voankazo ary misy voninkazo fotsy na voninkazo fotsy, dia midika izany fa voahitsakitsaka ny fepetra fanamainana sy fitehirizana azy ireo.
Rehefa mividy daty voafono anaty boaty dia mila mitandrina ny fihenan'ny fonosana sy ny fitovian'ny loko: ny hoditry ny voankazo tsy tokony ho ketrona. Raha mitazona mandritra ny fotoana maharitra ny daty ary tsy mamoy ny kalitaony ilaina, dia tsara kokoa ny mametraka azy ireo ao anaty fitoeran-kazo misy rakotra ary mitazona amin'ny toerana mangatsiatsiaka.
Misafidy voankazo maina ho an'ny strudel
Rehefa misafidy prun eny an-tsena dia mifidiana voankazo misy loko mainty misy loko kely. Ny voankazo misy loko volontsôkôlà dia azo inoana fa naroboka tao anaty rano mihoatra ny indray mandeha alohan'ny hametrahana azy - mety ho marikivy na marikivy ny prunes toy izany.
Matetika, ny voankazo maina dia tsaboina amin'ny endrika manokana mba tsy ho very ny fampisehoana sy ny tsiro voalohany. Izany no antony, alohan'ny handrahoana, ny voankazo dia tsy maintsy hosasana tsara ary avela ao anaty rano mangotraka mandritra ny ora maromaro. Ary ny karazam-boasary maivana dia sasana im-betsaka ary avy eo tazomina anaty ronono marikivy na kefir.
История | Tips | Voa maina | Strudel
Voankazo mofomamy azo ampiharina amin'ny kobanina amin'ny kefir Fomba fahandro fahandro
Doka tsindrin-tsakafo haingana - strudel
Puff pasty poavra amin'ny voaroy: laody
Posted in sakafo sy fikarakaranaTagged История, Tips, Voa maina, Strudel
Prev Cosmonauts "Zero" - fiomanana amin'ny sidina voalohany
Manaraka Ny sakafo Osama Hamdiy dia fomba tsara hampihenana ny lanja
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,935.